2 Madzimambo 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 5:1-27
5 Zvino Naamani,+ mukuru weuto ramambo weSiriya, akanga ava murume mukuru pamberi pashe wake uye airemekedzwa, nokuti Jehovha akanga aponesa Siriya achimushandisa;+ murume wacho akanga ari murume akashinga, ane simba, kunyange zvazvo aiva nemaperembudzi. 2 VaSiriya vakanga vaenda semapoka evapambi,+ vakatapa musikana muduku+ kunyika yaIsraeri, uye akazoshandira mudzimai waNaamani. 3 Kwapera nguva yakati, iye akati+ kuna tenzikadzi wake: “Kudai ishe wangu aiva pamberi pomuprofita+ ari kuSamariya! Iye aizomuporesa maperembudzi+ ake.” 4 Naizvozvo mumwe munhu akasvika, akataura kunashe wake kuti: “Musikana anobva kunyika yaIsraeri akataura+ zvokuti nezvokuti.” 5 Mambo weSiriya akabva ati: “Enda! Rega nditumire tsamba kuna mambo waIsraeri.” Naizvozvo akaenda akabata+ matarenda gumi esirivha nezvidimbu zviuru zvitanhatu zvendarama+ nenguo gumi dzokuchinja+ muruoko rwake. 6 Akasvika netsamba+ yacho kuna mambo waIsraeri, yaiti: “Zvino panosvika tsamba ino kwauri, ndatumawo mushandi wangu Naamani kwauri, kuti umuporese maperembudzi ake.” 7 Zvino mambo waIsraeri paakangoverenga tsamba yacho, akabva abvarura+ nguo dzake, akati: “Ndini Mwari here,+ kuti ndiuraye kana kuchengetedza munhu ari mupenyu?+ Nokuti munhu uyu ari kutumira shoko kwandiri kuti ndiporese munhu maperembudzi ake; ndapota, tarirai, muone kuti ari kutsvaka sei kupopotedzana neni.”+ 8 Zvino Erisha munhu waMwari wechokwadi paakangonzwa kuti mambo waIsraeri akanga abvarura nguo dzake,+ akabva atumira shoko kuna mambo achiti: “Mabvarurirei nguo dzenyu? Ndapota, ngaauye kwandiri kuti azive kuti pakati paIsraeri pane muprofita.”+ 9 Naizvozvo Naamani akasvika aine mabhiza ake nengoro dzake dzehondo, akamira pasuo reimba yaErisha. 10 Asi Erisha akatuma nhume kwaari, achiti: “Enda uko, ugeze+ kanomwe+ muJodhani kuti nyama yako idzoke kwauri;+ uchene.” 11 Naamani akatsamwa,+ akatanga kuenda achiti: “Ndanga ndati,+ ‘Achabuda ouya kwandiri, omira, odana zita raJehovha Mwari wake, opuruzira panzvimbo yacho noruoko rwake, oporesa ane maperembudzi.’ 12 Abhana naFapari, nzizi dzeDhamasiko,+ hadzisi nani kupfuura mvura yose+ yaIsraeri here? Handingagezimo ndikachena here?”+ Naizvozvo akatendeuka, akaenda akatsamwa.+ 13 Zvino vashandi vake vakaswedera pedyo, vakataura naye, vakati: “Baba vangu,+ kudai muprofita anga akuudzai kuti muite chinhu chikuru, maisazochiita here? Zvino zvakadini zvaati kwamuri, ‘Geza, uchene’?” 14 Akabva aenda, akazvinyudza muJodhani kanomwe maererano neshoko romunhu waMwari wechokwadi;+ nyama yake ichibva yadzoka ikafanana nenyama yomukomana muduku,+ akava akachena.+ 15 Akabva adzokera kumunhu waMwari wechokwadi,+ iye neboka rake rose, akasvika akamira pamberi pake, akati: “Zvino, ndava kuziva kuti panyika pose hapana Mwari asi pakati paIsraeri chete.+ Zvino ndapota, gamuchirai chipo chokuonga+ chomushumiri wenyu.” 16 Asi iye akati: “NaJehovha mupenyu+ wandinomira pamberi pake, handisi kuzochigamuchira.”+ Akatanga kumumanikidza kuti achigamuchire, asi iye aingoramba. 17 Naamani akazoti: “Kana musingadi henyu, ndapota, mushandi wenyu ngaapiwe ivhu,+ mutoro ungatakurwa nemanyurusi maviri; nokuti mushandi wenyu haazopizve vamwe vanamwari chero vapi zvavo chinopiwa chinopiswa kana chibayiro kunze kwaJehovha.+ 18 Jehovha ngaakanganwire mushandi wenyu pane izvi: Ishe wangu paanopinda muimba yaRimoni+ kuti akotame imomo, paanenge akasendama+ paruoko rwangu, ini ndikakotama+ muimba yaRimoni, pandinokotama muimba yaRimoni, ndapota, Jehovha ngaakanganwire mushandi wenyu pane izvi.”+ 19 Iye akati: “Enda norugare.”+ Naizvozvo akabva kwaari, akafamba chinhambwe chakati. 20 Zvino Gehazi+ mushandi waErisha, munhu waMwari wechokwadi,+ akati: “Tenzi wangu arega Naamani+ muSiriya uyu zvaasina kugamuchira zvaauya nazvo paruoko rwake. NaJehovha mupenyu,+ ndichamumhanyira, nditore chimwe chinhu kwaari.”+ 21 Gehazi akatevera Naamani. Naamani paakaona mumwe munhu achimumhanyira, akabva aburuka mungoro yake kuti asangane naye, akati: “Kwakanaka here?”+ 22 Iye akati: “Kwakanaka. Tenzi wangu+ andituma+ achiti, ‘Tarirai! Majaya maviri, vanakomana vevaprofita,+ achangobva kusvika kwandiri, achibva kunzvimbo ine makomo yaEfremu. Ndapota, vapeiwo tarenda resirivha nenguo mbiri dzokuchinja.’”+ 23 Naamani akati: “Tora hako matarenda maviri.” Akaramba achimumanikidza,+ akazosungira matarenda maviri esirivha muhomwe mbiri, nenguo mbiri dzokuchinja, akazvipa vashandi vake vaviri, kuti vazvitakure vari pamberi pake. 24 Paakasvika kuOferi, akabva azvitora pamaoko avo, akazviisa mumba make,+ akarega varume vacho vachienda. Naizvozvo ivo vakaenda. 25 Iye akapinda, akabva amira pedyo natenzi wake.+ Zvino Erisha akati kwaari: “Gehazi, uri kubva kupi?” Asi iye akati: “Mushandi wenyu haana kwaamboenda.”+ 26 Iye akati kwaari: “Mwoyo wangu hauna kuendawo paya patendeuka murume wacho kuti aburuke mungoro yake kuti asangane newe here? Ndiyo nguva yokugamuchira sirivha kana kugamuchira nguo kana minda yemiorivhi kana minda yemizambiringa kana makwai kana mombe kana vashandirume kana vashandikadzi here?+ 27 Naizvozvo maperembudzi+ aNaamani achanamatira iwe nevana vako nokusingagumi.”+ Pakarepo akabva pamberi pake, ava nemaperembudzi akachena sechando.+